Mhando dzeMabhizinesi uye Akabatanidzwa Masangano Emutemo
Unincorporated Bhizinesi Zvivakwa
Sole Proprietorship inotsanangura chero mhando bhizinesi riri remunhu mumwe, uye iri pakati pezvakakosha zvebhizinesi zvivakwa. Iyo Sole Proprietorship inogona kuve chero saizi, kubva pamusika wepakona wepasi, kuenda kuimba hombe yekuchengetera. Hupamhi hwavo hwekuzvarwa hunovaita iro bhizinesi rakareruka kusimuka pasi, asi izvi zvakapfava zvechimiro zvakare zvinosiya muridzi wega proprietorship iri panjodzi yekunanga chikwereti. Kunyangwe iine zita rakazvimiririra (sezvazviri ne "DBA" kana "kuita bhizinesi se"), nekuti hapana "chakaparadzaniswa chepamutemo" chinzvimbo chebhizinesi, muridzi anonyatso tarisa chikwereti chake uye mutero mutero, uye izvi zvinoreva kuti bhizinesi rake rese neepfuma zvaangave ari munjodzi kana paine chikwereti chemari, mutero, kana mutemo zviri pamutemo kana kukwirwa kwakakonzera mhedzisiro isingafadzi. Uku kurasikirwa kunogona kubuda kubva mubhizinesi kana nharo yemunhu.
Rumwe ruzivo rweSole Proprietorship
Kudyidzana kunotsanangura chero bhizinesi kana bhizinesi rekuita uko kune vanopfuura mwene muridzi anobatanidzwa. Ivo vanobatirana mumubatanidzwa vanogona kuve vanhu vamwe, makambani, kana matirastii, uye muridzi unogovaniswa pakati pevadyidzana; izvi zvinosanganisira mari yese pamwe nezvose zvikwereti uye mutoro. Nepo kudyidzana kuchikwanisa kuvhurwa kwebhizinesi kana bhizimusi nekuti zvinhu zvakaunganidzwa mukufarira bhizinesi, iko kuderera kwekudyidzana kune njodzi zhinji dzakavanzika. Chekutanga pakati penjodzi idzi ndechekusaganhurirwa, kwakanangana mutoro kune vese vadyidzani. Nekuti ivo varidzi vebhizimusi rakanangana, ivo vadyidzani vane chikwereti chakanangana nezvikwereti zvakawanikwa, chero kurasikirwa kwakasangana, kana chero mutero kana zvikwereti zvemari zvinomuka kubva mukushanda kwekudyidzana. Kupfuurirazve, ivo vaviri vacho vanotarisana nenjodzi kunyangwe kubva kwavari, nekwaniso yeumwe wevadyidzani kuita bhizinesi muzvisungo zvemari izvo zvinogona kunge zvisina basa kubhizinesi, kana izvo zvinokonzeresa mutero wezvemari kana mutero. Uye chikwereti hachiganhurirwe kuzvisungo zvemari: iyo yekudyidzana kwese inogona kuve nemhosva kune chero zviito zvakaitwa nemumwe mudiwa, ichivasiya vachionekwa kumatare edzimhosva. Chekupedzisira, kunyangwe paine mikana yemutero mukudyidzana pamusoro pehushe chete, hazvina kukosha sezvazvingaite nebhizinesi rakarongeka, rakabatanidzwa. Rumwe ruzivo rwehukama
Akabatanidzwa Bhizinesi Zvivakwa
A Joint Venture isangano repamutemo rakaumbwa pakati pemapati maviri kana anopfuura
kuita zviitiko zvehupfumi pamwe chete. Mapato anobvumirana kuumba
sangano idzva neese ari maviri anopa kuenzana, uye ivo vanobva vagovana mu
mari, mari, uye kudzora kwebhizinesi. Iyo inogona kuve
kune rimwe chete chirongwa chete, kana kuenderera bhizinesi hukama
senge mubatanidzwa weSony Ericsson. Izvi zvinopesana ne
hurongwa hwehukama, uhwo hunosanganisira kusaenzana kwevatambi,
uye yakarongeka zvishoma. Mamwe Joint Venture Ruzivo
Mubatanidzwa wakaganhurirwa (LP) unoumbwa nemumwe kana vazhinji vanobatana navo uye mumwe kana vamwe vashoma vanobatirana kuitira kuti vagadzire rakasiyana, repamutemo sangano. Zvikuru seGeneral Kudyidzana, chengetera iwo akapatsanurwa, mashoma mamiriro evashoma vanobatirana. Kunetsekana kwekutyaira kunowanzo dzivirirwa kubva pamutoro uye kugona kugovera mari pakati pevazhinji vagovana (muchimiro chemadivheji) izvo zvingadai zvisingaite pasi pekambani yakajairwa. Vazhinji vadyidzani vane basa rekuita kwezuva nezuva rekambani, uye ivo pachavo vane mutoro wezvavaisungirwa uye zvikwereti. Kuti utore chikwereti, mubatanidzwa kana kambani ine chikwereti chakashomeka inowanzo shandiswa mune yakajairika nzvimbo yekudyidzana yeiyo Yakabatana Kudyidzana. Vashoma vadyidzani vanodyara mari mukambani uye vanogovana mune purofiti, asi havatore chikamu mukuita kwezuva nezuva kwebhizinesi. Mhosva yavo, kana kambani ikamhan'arirwa, inoganhurirwa mukuenzana nemari yemari yavanodyara.
Zvimwe Zvishoma Kudyidzana Ruzivo
Kambani ine chikwereti chakashomeka, kana "LLC" isangano rebhizinesi chimiro rinotendera mamwe marapirwo akanaka emitero, pamwe nekuchengetedzwa kwemutoro wega, kune "nhengo" dzinobatanidzwa. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti iyo chaiyo mamiriro uye chinzvimbo chinogona kusiana kubva kudunhu kuenda kuhurumende saka kunyatso tarisisa kwemitemo yenyika iyo iyo LLC ichaumbwa ichave yakakosha.
Iyo LLC sebhizimusi dhizaini modhi inobvumidza kune vakawanda varidzi, kana "Nhengo," uye "Inotungamira Nhengo," kunakidzwa kushomeka mutoro. Nhengo Inotungamira inowanzo kuve mukuru musoro wesangano uye rinotarisira manejimendi. Iyo purofiti kana kurasikirwa kwesangano rebhizinesi rinopfuura rakananga kuburikidza kunhengo yemunhu yemari yemitero inodzoka.
Zvimwe Zvishoma Zvikwereti Kambani Ruzivo
Yetsika Corporation (kana "C" Corporation) inosanganisirwa bhizinesi dhizaini inogadzira nyowani, yakaparadzaniswa, zviri pamutemo sangano rakasiyana nemuridzi (varidzi). Sechikamu chakaparadzana, chepamutemo, C Corporation inogona kuita bhizinesi, kuve neayo maakaundi ebhangi, kupinda muzvibvumirano zviri pamutemo, kumisikidza kuzivikanwa kwayo kwechikwereti, uye kutowana pfuma nenhumbi. Imwe yemabhenefiti makuru ekuve chinhu chakazvimiririra ndechekuti varidzi veSangano, vanozivikanwa se "Vagovani," vanowana kuchengetedzwa kwakaringana. Izvi zvinoreva kuti yavo yemidziyo inodzivirirwa kubva kune chero chikwereti chakakonzerwa nekambani, uye kuti ivo havasi ivo vega vane mhosva kune chero zvikwereti zviri pamutemo zvinokonzerwa nechero kukakavara kunopesana nekambani. Kukura kwekurasikirwa kwavo kunogumira kune huwandu hwesainzi yavo mukambani. Rudzi urwu rwekuchengetedzwa kwemidziyo uye mutoro wakatarwa unogona kubatsira zvakanyanya kune varidzi vega vangangodaro vachitsvaga kukwezva vangangoita mari, uye vangangodaro vari kutsvaga kudzikisira njodzi yake. Uye zvakare, kune mitero uye mipendero mabhenefiti zvinokwezva izvo zvinoita kuti Corporation ive yakanaka bhizinesi dhizaini kune bhizinesi munhu ari kutsvaga kutora nhanho inotevera mukudzivirira kweaseti uye chisungo chakashomeka. Kune zvimwe zvinhu zvekutarisa kana uchiumba Sangano, senge kutevedzera kumitemo, neimwe nzira inozivikanwa seCorporate Formalities, pakati pemamwe maratidziro. Ndokumbirawo ubaye pane iyi link kuti uwane rumwe ruzivo.
Mamwe Masangano Ruzivo
S S mubatanidzwa webhizinesi wakasanganisirwa uyo unoumbwa nenzira yekutevedzera sub-chitsauko S cheInternal Revenue Code. Yakaganhurirwa kune 100 vagovana mumatunhu mazhinji, iyo S Corporation inopa kune yakatemerwa chikwereti cheyakajairwa Corporation, uye vanoiroora iyo neiyo yekupfuura-kuburikidza nemutero wekudyidzana. Izvi zvinoreva kuti ivo vagovani vanodzivirira misungo yeviri-mutero, uko mari inotanga kubvisirwa mutero wekambani, uyezve kune imwe nhanho, nepo panguva imwechete ichipa yakatemerwa mutoro kuchengetedzwa kweCorporate. Sangano riripo rinogona kunyorera chinzvimbo cheS pamberi pemwedzi miviri uye mazuva gumi nematanhatu kupera kwegore remari. Pane zvimwe zvinodiwa pakukodzera zvinofanirwa kuzadziswa, saka ndokumbirawo uteedzere iyi link kuti uwane tsananguro yakazara.
Zvimwe S Corporation Ruzivo
A Professional Corporation inosanganisirwa bhizinesi dhizaini rakaumbwa nevanhu kana mapoka evanhu vangangodaro vasina hungwaru kusabatanidzwa mukuumbwa kwekambani kukodzera. Aya mahunyanzvi anosanganisira vanachiremba, magweta, maakaundendi, mainjiniya, nezvimwe, vakafunga kuti rondedzero ichasiyana mune zvidiki mamiriro nenyika. Iri boka rinofanirwa kuve rakarongeka nechinangwa chekupa mabasa ehunyanzvi, uye rinofanirwa kuve nehunyanzvi vane marezinesi ekudzidzira basa ravo. Nyanzvi dzeMakambani dzinopa akawanda emitero yakafanana yemitero uye mabhenefiti emitero anoitwa neMasangano echinyakare.
Yakawanda Professional Corporation Ruzivo
Sangano risingabatsiri chinhu chakabatanidzwa chakagadzirirwa kuita zviitiko nekupinda mukati mekutengesa pasina chinangwa chetsika chekugadzira purofiti. Iyo Isiri-purofiti Corporation inopa mazhinji eayo mamwechete edziviriro kubva kuzvikwereti kune avo vagovana navo ayo echinyakare Corporation inopa. Kupesana nemusoro waro, Isiri-purofiti Corporation inogona kuunza purofiti, asi izvo hazvifanire kunge zviri chinangwa chayo chekutanga, uye purofiti dzese dzinofanirwa kushandiswa mukufambisa zvinangwa zvisiri zvebhizimusi zveiyo Isina-purofiti Corporation. Iko hakuna kugoverwa kwemari kana zvikwereti zvakabhadharwa kune vagovana mune iyo Isina-purofiti Corporation.
Rumwe Ruzivo Rusingabatsiri